Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Emirates Airlines izao dia miasa sidina mankany amin'ny tanàna 9 any amin'ny kaontinanta 4 mankany Dubai
Emirates dia hanohy ny sidina avy any Dubai mankany Jakarta, Manila Taipei, Chicago, Tunis, Algeria, ary Kabul ankoatry ny hetsika efa natomboka tany London sy Frankfurt. Ireo serivisy ireo dia hanamorana ireo mponina sy mpitsidika maniry hody.
Miaraka amin'ny fampitomboana ny serivisy sy ny sidina mivoaka an'i Dubai, natolotry ny Emirates ny asany ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena Terminal 3. Ny mpanjifa dia takiana hanaraka ny fepetra ara-pahasalamana sy fiarovana rehetra takian'ny manampahefana UAE sy ny firenena itodiana.
Ny olom-pirenena amin'ny firenena itodiana sy ireo mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fidirana ihany no avela hiditra. Ny mpandeha dia takiana hanaraka ny fepetra takian'ny firenena tsirairay avy.
Mandritra io fotoana io dia tsy hisy ny fizahana an-tserasera sy ny fisafidianana seza misy ary ny serivisy toy ny chauffeur drive sy ny efitrano fandraisam-bahiny dia tsy ho hita amin'ny toerana rehetra aleha.
Emirates koa dia hanolotra serivisy fanovana amin'ireo sidina ireo. Tsy ho hita ny magazina sy ny fitaovana famakiana pirinty hafa, ary raha mbola hatolotra an-tsambo ny sakafo sy ny zava-pisotro, dia novaina ny fonosana sy ny fampisehoana mba hampihena ny fifandraisana mandritra ny serivisy fisakafoanana sy ny loza mety hitrangan'ny aretina.
Kitapo kabine Tsy ekena amin'ireo sidina ireo. Ireo entana izay avela ao anaty tranony dia ho ferana amin'ny solosaina finday, kitapo, kitapo na entana zazakely. Ireo entana hafa rehetra dia tsy maintsy zahana, ary ny Emirates dia hanampy ny vola fanampiana amin'ny valizy ao amin'ny magazain'ny mpanjifa.
Ny mpandeha dia takiana amin'ny fampiharana torolàlana momba ny halaviran'ny fiaraha-monina mandritra ny diany ary manaova sarontava azy manokana rehefa eny amin'ny seranam-piara-manidina sy eny ambony fiaramanidina. Tokony ho tonga amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Dubai ny mpandeha Terminal 3 ho an'ny fizahana, adiny telo alohan'ny fiaingana. Ny kaonteran'ny check-in Emirates dia tsy handahatra afa-tsy ireo mpandeha mitazona famandrihana voamarina ho any amin'ireo toerana voalaza etsy ambony ireo.
Ny sidina Emirates rehetra dia handalo fanadiovana fanatsarana sy famonoana otrikaretina any Dubai, isaky ny dia.